९ कक्षामा पढ्ने Awani को तहल्का मच्चाउने र्‍याप, अन्तरबार्ता लिने नै चकित ! [भिडियो]
नेपालमा यति धेरै प्रतिभाहरु लुकेर बसेका छन कि भर्खरै हामिले महशुस गर्न थालेका छौ । अनलाइनमा नेपालीहरुको पहुछ बढे संगै आजभोली फरक फरक प्रतिभाहरु देख्न पाउछौ । मुख्यतय युट्युवबाट देखिन आउने यस्ता प्रतिभा सोसियल मिडियामा आईसकेपछी राम्रै चर्चा कमाउन सफल हुन्छ । केही हदसम्म दैनिकी नै अलग बन्न गएको देखिन्छ । कतिपय त सेलिब्रेटी नै बन्न सफल भएका छन ।
यस्तै क्रममा ईन्साईडर मिडियाले ल्याएको यस भिडियोमा एक किशोरीको प्रतिभा अचम्मको छ । उनी नाम कहलिएका र्‍यापर हरु जस्तै प्रतिभावान देखिन्छिन । उनी हुन अवानी अधिकारी “वानी” । उनी कौशल एकेडेमीमा ९ कक्षामा पढ्छिन । ६ कक्षामा अध्ययन गर्दा देखि हिपहपमा आफ्नो रुचि बढेको र ७ कक्षामा पढ्दादेखी लेख्न थालेको उनी बताउछिन । उनले आफैले लेखेको र्‍याप गाएर सुनाईन । उनी भन्छिन, “मैले धेरै लेखेको छु तर नेपाली भन्दा बढी इङलिसमा लेखेको छु ।” भिडियोको लागी तल हेर्नुहोला ।
* यस्तो छ नेपालमा र्‍याप गितकाे इतिहास !
जिउमा नमिल्ने धोक्रे लुगा, शारीरिक हाउभाउ पनि उस्तै अनि एकोहोरो गन्थन सुनाए जस्तो गीति शैली । र्‍याप गाउनेहरुलाई आम आँखाले हेर्दा समाजभन्दा निकै टाढाको प्राणी जस्तै देखिन्छ । संस्कार र परम्पराको विरोधीजस्तो लाग्छ । टुटेफुटेका शब्द फलाक्दै फेशन देखाउने ‘ठेट्ना केटाहरु’को भन्दा बढ्ता चिनारी उनीहरुको बन्दैन ।
तर, उनीहरुको जीवनलाई गहिरोसँग चिहाउने र गाएका शब्दहरु सुन्ने हो भने उनीहरु गम्भीर मात्र लाग्दैनन्, समाजभित्रका हरेक पाटो केलाउँदै गीतमार्फत जीवनोपयोगी सन्देश पनि छरिरहेको पाइन्छ ।
कतिपय र्‍याप गीतहरु जनवादी गायक जीवन शर्मा र जेबी टुहुरेका सिर्जना भन्दा कम प्रगतिशील देखिँदैनन् । र्‍यापभित्रको प्रगतिशीलतालाई ध्यान दिने हो भने विशेष गरी कम्युनिष्टहरुले र्‍यापलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा पनि बहस गर्नैपर्ला अहिलेको युगमा । नेपाली र्‍याप गीतहरुले सामाजिक सवाल उठाएर अग्रगामी सोच राखेको प्रशस्तै देखिन्छ ।
यस हिसाबले समाज र संस्कारदेखि अलग देखिने र्‍याप गाउने पुस्ताले समाजलाई गति दिने भाव पनि उत्तिकै समेट्ने गरेको पाइन्छ । त्यसोभए र्‍याप गीतहरु कति प्रगतिशील छन् त ? यो प्रश्नको जवाफलाई व्याख्या चाहिँदैन, स्वयम् गीतहरुले नै प्रमाण दिन्छन् ।
नेपाली र्‍याप गीतको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले र्‍यापको इतिहास र परिभाषा केलाउने प्रयास गरौं । र्‍यापको साइनो अमेरिकाको अश्वेत आन्दोलनसँग जोडिएको हुनाले यसले क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि बोकेको छ ।
* र्‍यापको इतिहास
बोलिने वा गुनगुनाइने अनुप्रासयुक्त शब्दलाई र्‍याप भनिन्छ । अंग्रेजी शब्द RAP लाई ‘रिदम एन्ड पोएट्री’ समेत भनेर अर्थ्याइन्छ, अर्थात् लयमा बगेको कविता । यसमा कुनै पनि विषयवस्तु अनुप्रासमय प्रवाहमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
यसैले र्‍यापर हुने मानिसमा कविको गुण हुनुपर्छ । र्‍यापमा गीत गाउनुभन्दा पनि शब्द उच्चारण गर्दै बोल्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिन्छ । र्‍याप वा र्‍यापिङलाई दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सवर्गमा सुरु भएको क्वेटो म्युजिकमा प्रयोग भएको एउटा शैली मानिन्छ । शैलीको हिसाबले र्‍यापले भाषण, गद्य शैली, कविता र गायनको दायरा समेट्छ ।
* डिजे कुल हर्क
र्‍यापको इतिहास हेर्ने हो भने यसको थालनी सन् १९७० को दशकमा स्ट्रीट कविताबाट भएको पाइन्छ । र्‍याप म्युजिक (यदाकदा हिपहप म्युजिकको रुपमै बुझिने) सुरुवातमा अफ्रिका-अमेरिकामा स्ट्रीट कल्चरको रुपमा रहेको विश्वास गरिन्छ, जुन लोकप्रिय संगीतको एउटा शैली थियो ।
अमेरिकाको संक्रमणकालमा पार्कमा भेला भएका बेरोजगारहरुलाई जमैकनहरुले गीत सुनाउने क्रममा र्‍यापको ख्याति बढेको बताइन्छ । पछि मानिसहरुले राजनीतिक समस्या पनि र्‍याप मार्फत भन्न थाले । विशेष गरी गोरा जातिले गरेको विभेद विरुद्ध अश्वेत समुदायले छिटो-छिटो बोलेर, राजनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने परम्पराबाट र्‍याप शैलीको विकास भयो ।
पहिलो र्‍यापर जमैकन आप्रवासी कुल हर्कलाई मानिन्छ । पहिलो डिजे समेत मानिने उनलाई हिपहपको संस्थापक पिता समेत मानिन्छ ।
* प्रगतिशील कित्तामा र्‍याप
सामान्य रुपमा बुझ्दा संगीतको बिटमा बोल्ने शैली नै र्‍याप हो । तर, र्‍यापको महानता शब्दमै भएकाले यसले व्यक्तिदेखि संसारसम्मको कुरा समेट्ने गर्छ । दुई दशकभन्दा अगाडि नेपालमा र्‍याप भित्र्याएका गिरीश खतिवडाकै कुरा गरौं ।
एक समय र्‍याप गायन थाल्दा ‘बिग्रेको केटो’ भनेर सबैबाट आलोचना सुनेका उनले देशको राजनीतिक विकृतिदेखि समाजमा महिलाको अवस्थासम्मको चित्रण आफ्नो गीतमा गरेका छन् । हालै उनले महिलाहरुलाई ऊर्जा दिने नयाँ गीत ‘बी ह्वाट यु वान्ना बी’ तयार पारेका छन् ।
नयाँ गीतबारे गिरीश भन्छन्, ‘महिलाहरु अझै पनि समाजमा असुरक्षित र कमजोर महसुस गर्छन् । उनीहरुले चाहे जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने भावसहित महिलाहरुलाई सबलीकरण गर्ने गीत बनाएको छु ।’ गीतमा उनले मीरा राई, सिपोरा गुरुङ, अनुराधा कोइराला, अभया लगायत समाजमा स्थापित महिलाहरुको उदाहरण अघि सार्दै अरु महिलामा हिम्मत भर्ने प्रयास गरेका छन् ।
प्रायः सन्देशमूलक गीत गाउने उनीसहितको ‘गिरीश एन्ड द युनिटी’को सुरुवाती समयको ‘मलाई भोट देऊ’ गीत पनि कम छैन । भोट पाएपछि जनताको सपना कुल्चिने नेताप्रतिको आक्रोश हो गीत ।
मेरो पार्टी हो एक्स, मेरो चुनाव चिह्न एक्स
एक्काइसौं शताब्दीमा स्वागत छ
आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिने तागत छ
तेरो त्यो क्यास चेक नेम फेम अनि फ्याक्स
सबैको स्रोत हाम्रो मन्थ्ली इन्कम ट्याक्स ।
यस्तै, अर्को गीत ‘ड्रग्स मेरो घर’ मा कुलतबाट टाढिन प्रयासरत युवाको पीडा समेटिएको छ ।
एक समय गिरीशसँगै र्‍याप गायनमा लागेका सुदिन पोखरेल पनि र्‍यापलाई आफूभित्रको विद्रोह र आक्रोश पोख्ने थलो पनि मान्छन् । ‘यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटो पनि हो’ उनले भने, ‘स्टाइल पारेर के बोलेको होला जस्तो लाग्न सक्छ, तर र्‍यापमा आफूलाई चित्त नबुझेको समाजको पाटो समेत आइरहेको हुन्छ ।’
अर्का र्‍यापर लाउरेको एउटा गीतले राजनीतिमा ठूला माछाहरु खुलमखुला चरिचरनमा रहेको पाटो गाएका छन् –
मापसे गर्नेहरुको बाटो तैंले मोड्दिइस्
थाहा पाुथेँ सोल्टाहरुको मुख तैंले फोड्थिइस्
शरीर बेच्नेलाई समातिस् तर देश बेच्नेलाई छोड्दिइस् ।
लाउरेकै अर्को गीतले जनतालाई निरीह भएर नबस्न र सचेत भएर राजनीतिक कित्तालाई प्रश्न गर्न जोस्याउँछ ।
किन चुप नेपाली, खोज जोरी दाह्रा किटी
तेरो हक मुन्ट्याइसक्यो, घुसखोरी राजनीति
तीन करोड छन् भोको पेट, त्यसको बाउलाई बास्मती
तेरै आन्दोलनमा सुक्यो, बाँकी भुको सास जति
कति भर्छस् खल्ती, बेची आँगन घरको
काम गर्न मान्छस् झर्को, भाषण भने सधैं चर्को ।
र्‍यापरहरुले समाजका विकृति त केलाएकै छन्, जीवनमा आदर्श र मान्यता कति महत्वका कुरा हुन् भनेर पनि संवेदनशील रुपमा उठाएका छन् । नयाँ र्‍यापर भी-टेनले आर्थिक दरिद्रतामा पनि अविचलित रहने लाखौं दीनहीनहरुको आवाज बोलेका छन्-
गरिबीले पिछडिएनि हाम्रो मन स्वच्छ छ
धनी मान्छेहरुको धन सदा जहिल्यै तुच्छ छ
संघर्ष गरौं सधैं अघि बढौं
सामु आउँछ दुःख कष्ट दुःखसँग लडौं
जहिल्यै श्रम शोषण
राम्रो छैन पालन पोषण ।
* यमबुद्धको प्रगतिशील धार
नेपाली र्‍यापको विस्तारमा विशेष भूमिका खेल्ने यमबुद्धले त झन् धेरै युवालाई जीवनोपयोगी सन्देश नै दिए । युवाहरुको एउटा सर्कलमा र्‍यापलाई ढुकढुकी नै बनाएका उनले व्यक्तिगत साहसको र सत्यप्रति अडिग रहने कुरा गर्दै सामाजिक विडम्बनाको पाटो समेत खोतलेका छन् ।
म फुट्छु तर झुक्दिनँ
दिनरात लड्छु सुत्दिनँ
अघि बढ्छु बरु मर्छु
जबसम्म पुग्दिनँ गन्तव्यमा मेरो
म कर्त्तव्यबाट उठ्दिनँ
सभ्य केही बुझ्दिनँ
म सत्यबाट लुक्दिनँ ।
यमबुद्धले अर्को गीतमा छोरा-छोरीबीचको विभेदको कुरा मात्र गरेका छैनन्, नेपाली समाजमा प्रचलित बाल विवाहको प्रसंग खोतल्दै चेलीबेटी बेचबिखनको गम्भीर विषय पनि उठान गरेका छन् ।
एक किसानको घरमा नवशिशु जन्मियो
तर, छोरी पो रैछ भनी उसको मन झस्कियो
केही वर्षपछि उनीहरुको फेरि बच्चा भो
यसपालि छोरा पाएर होला किसान मक्ख भो
समय बित्दै जाँदा किसानी नानी पनि ठूली भइन्
तर सधैं बाबाको हेलामा रोइरहिन्
दाउरा र चूलो पानी पँधेरोमै पुरिरहिन्
उज्यालो नपाई प्रायः अँध्यारोमै लुकिरहिन्
मात्र १३ वर्षकी उनलाई पढ्ने मन त थ्यो
तर बुवाको उसले उनलाई पराया भन्दथ्यो
छोरीको भलाइभन्दा फाइदा र घाटा सम्झन्थ्यो
बिहे गर्न तम्सन्थ्यो तर दाइजोले झस्कन्थ्यो ।
यमबुद्धका पिता अम्बिकाप्रसाद अधिकारी आफ्नो छोराले र्‍यापलाई समाज सुधारको पक्षमा प्रयोग गरेको महसुस गर्दै भन्छन्- ‘यस्ता गीत किशोरहरुले निराशा प्रकट गर्नमात्रै गाउँछन् भन्ने हामी सबैको धारणा थियो, तर यमबुद्धले युवाहरुलाई कुलतमा नलाग्न र असल बाटोमा लाग्न प्रेरणा दिएको मैले महसुस गरेको छु ।’
* र्‍यापबारे प्रकाश सायमी के भन्छन् ?
संगीतसम्बन्धी अनुसन्धाता प्रकाश सायमीलाई पनि शक्तिशाली शब्द आउने भएकाले र्‍यापको निर्माण पक्ष राम्रो लाग्छ । मजदुरहरुले कारखानामा कम समयमा गीत गाउनुपर्दा बनाएका गीतहरु भएकाले र्‍यापको विशिष्ट महत्व देख्छन् उनी । तर, नेपाली र्‍याप गीतहरु बाहिरका गीतहरु जस्तो लिरिकल रुपमा सशक्त नभएको उनको हेराइ छ ।
‘यहाँ र्‍याप बनाउँदा ‘फिल इन द ब्ल्याङ्क’ गरेजस्तो मात्र देखियो’, सायमी भन्छन्, ‘गीत बनेपछि र्‍याप भर्ने काम भएकाले त्यति वजनदार हुन सकेन ।’ यद्यपि पछिल्लो समयमा र्‍याप सिङ्गल गीतकै रुपमा आउन थालेको र यो प्रयास स्वागतयोग्य भएको उनको ठहर छ । पछिल्लो समय निर्णय, यमबुद्धहरुले र्‍यापलाई धेरै फरक किसिमले ल्याएको उनी बताउँछन् ।
* र्‍याप र ड्रग्सको के साइनो ?
एउटा खास शैलीमा खुम्चिएर नबसी बक्सबाट बाहिर निस्किन खोज्ने हिपहप कल्चरसँग र्‍याप नजिक मानिन्छ । यसैले लुगा लगाउने र बोल्ने शैली नै अरुभन्दा भिन्न हुन्छ । हिपहप सिंगो संस्कृति हो भने र्‍याप चाहीँ गाउने शैली हो ।
स्वाभावैले नयाँ पुस्ता नयाँपन रुचाउँछ । यसैले युवा पुस्ता हिपहप कल्चर र र्‍यापसँग जोडिएका छन् । एक समय घरैपिच्छे गिटार समाएर पपगीत गुनगुनाउने युवाकै हाराहारीमा अहिले र्‍यापको मोहनीमा पर्नेहरु छन् । यो उमेरमा बढीजसो ड्रग्समा फस्ने र समूहमा आवारागर्दी गर्दै हिँड्ने भएकाले र्‍यापरहरु पनि खराब हुन्छन् भन्ने सोचाइ छ ।
अमेरिकाकी चर्चित हिपहप गायिका आइसा फुकुसिमालाई र्‍यापलाई ड्रग्स र हिंसासँग जोडेर बुझिने गरेको चित्त बुझ्दैन ।
हिपहप संगीतबाट सामाजिक सन्देश फैलाउने आफ्नो कामलाई ‘र्‍याप्टिभिज्म’ भन्न रुचाउने यी अश्वेत गायिकाले बताएकी छिन्, ‘हामी र्‍यापमार्फत हामीले भोग्ने थुप्रै भेदभावका बीच पनि हामी स्वतन्त्र छौं र आ-आफ्नो समुदायको खुसीको लागि काम गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं ।’
नेपाली र्‍यापका प्रणेता गिरीश पनि र्‍यापले युवालाई कुलतबाट जोगाएर सकारात्मक बाटोमा डोर्‍याउन ऊर्जाको काम गर्ने धारणा राख्छन्, गाउने र सुन्ने दुवैलाई । उनी भन्छन्, ‘र्‍याप भनेको आत्मविश्वास हो । र्‍यापले प्रोत्साहन दिने र जोश बढाउने नै हो ।’
भिडियोमा हेर्नुहोस Awani Adhikari को र्‍याप !